कुन कम्पनीमा बीमा गर्दा कति बोनस पाइन्छ ? (सूचिसहित) – Clickmandu
कुन कम्पनीमा बीमा गर्दा कति बोनस पाइन्छ ? (सूचिसहित)
सोभित थपलिया २०७६ साउन २ गते १८:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये १३ वटा बीमा कम्पनीको बीमितलाई दिने बोनस दर सार्वजनिक गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजानिक गरेको बोनस दरका आधारमा तपाईंले बीमा गर्दा कम्पनी छान्न सक्नुहुने छ ।
बीमा गर्नुको पहिलो उद्देश्य जोखिमको न्यूनिकरण हो भने दोस्रो त्यसबाट आउने रिटर्न वा बोनस दर हो ।
१३ वटा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् । बोनस दर सार्वजनिक गर्ने बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल लाइफ, सूर्या, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, मेट, प्रभु, सन नेपाल, आइएमई लाइफ, ज्योति लाइफ, रिलायन्स, सानिमा, सिटिजन्स, गुँरास र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कमपनी रहेका छन् ।
बोनस दर सार्वजनिक गरेका कम्पनीमध्ये केहीले अधिकांशले बीमितहरुलाई प्रतिहजार ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दर दिने भएका छन् ।
नेपाल लाइफले बीमा अवधि अनुसार न्यूनतम ६५ रुपैयाँ देखि अधिकत्तम ८२ रुपैयाँ बोनस दिने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल लाइफले २१ देखि २५ वर्ष सम्म बीमा योजनाका लागि ७२ रुपैयाँ र बीमा अवधि २५ बर्ष भन्दा माथि भएका बीमा योजनाका लागि ८२ रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा अवधि अनुसार न्यूनतम प्रति हजारमा ३८ रुपैयाँ देखि अधिकतम ७३ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ ।
सूर्याले २५ देखि २९ वर्षलाई ६३ रुपैयाँ र ३० वर्ष वा सो भन्दा माथि भएका बीमा योजनामा ७३ रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ ।
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन
यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले बीमा अवधि अनुसार न्यूनतम प्रति हजारमा ६६ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८० रुपैयाँसम्म बोसन दिने जनाएको छ । २५ वर्ष वा सो भन्दा माथि भएका बीमा योजनामा ८० रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ ।
मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि बीमा अवधि अनुसार बोेनस दर सार्वजनिक गरेको छ । जसमा बीमितलाई प्रति हजारमा ५० देखि ८५ रुपैयाँसम बोनस पाउने छन् । मेट लाइफले २१ वर्ष वा सो भन्दा माथि भएका बीमा योजनामा ८५ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । बढी बोनस दिने बीमा कम्पनीमा दोस्रो स्थानमा मेट लाइफ रहेको छ ।
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिहजार न्यूनतम ३० देखि अधिकत्तम ७० रुपैयाँ बोनस दिने छ । २५ बर्ष वा सो भन्दा माथि बीमा अवधि भएका बीमा योजनाको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिने छ ।
सन नेपाल लाइफ
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिहजार न्यूनतम २० देखि अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ । इन्स्योरेन्सले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथि बीमा अवधि भएमा बीमा योजनाको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिने घोषणा गरेको छ ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्युनतम २५ देखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने घोषणा गरेको छ । आइएमईले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा अवधि भएका बीमा योजनाको लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिन बीमा समितिबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्युनतम ४० देखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ । ज्योतीले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा अवधि भएका बीमा योजनामा लागि ७० रुपैयाँ बोनस दिने जनाएको छ । २० देखि २४ वर्ष अवधि भएका बीमा योजनामा ५५ रुपैयाँ बोनस दिन बीमा समितिबाट अनुमति लिएको छ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दर दिने घोषणा गरेको हो । यसको लागि नियामक निकाय बीमा समितिबाट पनि अनुमति लिइसकेको छ ।
रिलायन्सले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनामा ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ ।
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई प्रतिहजार न्यूनतम ३५ देखि ६५ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको छ । इन्स्योरेन्सले २५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको बीमा योजनामा ४० रुपैयाँसम्म बोनस दिन बीमा समितिबाट अनुमति पाएको छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितहरुलाई नयाँ बोनस दिन बीमा समितिबाट स्वीकृति लिएको छ । सिटिजनले प्रतिहजार न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । सिटिजनले ३० वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ७० रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेक्स
गुराँस लाइफ इन्स्योरेक्स कम्पनीले बीमितहरुलाई दिने बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । गुराँसले प्रतिहजार न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । बोनस दर सार्वजनिक गरेका १३ वटा बीमा कम्पनी मध्ये सबै भन्दा बढी बोनस दिनेमा गुँरास नै रहेको छ । गुराँसले २५ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ८७ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेक्स कम्पनीले बीमितहरुलाई दिने बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । नेशनलले प्रतिहजार न्यूनतम ६३ देखि अधिकतम ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । बोनस दर सार्वजनिक गरेका १३ वटा बीमा कम्पनी यो पनि धेरै बोनस दिनेमध्येमा नै रहेको छ ।
नेशनलले २६ वर्ष वा सो भन्दा माथिको बीमा योजनालाई ८२ रुपैयाँसम्म बोनस दिने जनाएको छ । अरु कम्पनीहरुको पनि बोनस दर आउने क्रममा रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
प्रभु लाईफद्वारा तेश्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न
बीमाको जनचेतना जगाउन नेपाल भारत सिमानामा होर्डिङ बोर्ड
संख्या बढ्दा जीवन बीमामा बढ्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आम्दानी अनुसार कम्पनी चल्न नै मुश्किल
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पायो एसिया मोस्ट ट्रस्टेड अवार्ड